Otú ịgbanwe Ringtones on Android ekwentị mkpanaaka na iPhone
Ihu ọma ọ bụla dịkọrọ ndụ ekwentị mkpànaka atụmatụ ihe n'usoro nke dị iche iche ụdaolu iji họrọ si. N'ozuzu, ha bụ ndị a dịgasị iche iche nke oké nkume-awụ ọsọ n'ugwu, mba egwu, otu na-akpọ ihe ndị dị ka 'calypso' (kpọrọ ihe, nke họpụta ndị mmadụ?) Plus a ndumodu nke raucous tinkles na bụ n'ezie kama dull. N'ikpeazụ, e nwere bụ anọgide a omenala ekwentị mgbanaka maka eju anya ebumnobi.
Part 1: Android ekwentị mkpanaaka na
Nkebi nke 2: Apple iPhone
The ringtone bụ otu n'ime ihe ndị kasị isi na-ahụkarị n'ọnụ ịhazi ekwentị gị na nnọọ mma egwuregwu gị. Ya mere, m na-achọ ka m ụda ka ara si-adịghị agafe agafe track, ndina na nri ụtụtụ Man. M na ugbu a nwetara MP3, Otú ọ dị, kpọmkwem otú m ga-etinye ya na-egwu mgbe ọ bụla a na-akpọ m?
Ntọala> Sound> abata na ekwentị oku: ekwentị Ringtone-enye gị ohere ịhọrọ site a oke nke aj u i nwere.
NDỤMỌDỤ:-eme ka ị Android ringtone nchekwa
Ndị a bụ nanị OGG music data, echekwara na esịtidem ohere nchekwa, na usoro media audio ụdaolu nchekwa.
Na-akwaga ebe ika-ọhụrụ music faịlụ ka na nchekwa bụ n'ezie apụtakarị niile igwe, na ga n'egbughị oge imefusị niile gị esịtidem ohere nchekwa n'ụzọ ọ bụla, Otú ọ dị, adịghị ichegbuwe onwe, e nwere bụ otu nhọrọ ebe na SD kaadị na ị pụrụ ahu nagide: Media audio ụdaolu.
Otu nwere ike ịzụlite ụdaolu, audio, nakwa dị ka media nchekwa na gị onwe gị; i nwere ike ime nke a ma site na Android onwe ya, tinye n'ọrụ a Njikwa faili dị ka Album Version, ma ọ bụ site na njikọ ya na ekwentị gị n'ime kọmputa gị usoro, wụnye SD kaadị dị ka a mbanye, na tinye n'ọrụ na desktọpụ gị na kọmputa OS ka ika-ọhụrụ directories.
Ọzọ anya, emepụtaghachi MP3 a ụdaolu nchekwa. Otu ugboro ọzọ, ị nwere ike ime nke a na ekwentị gị ogologo gaa na ngwa dị ka Album Version, ma ọ bụ i nwere ike ahu nagide kọmputa gị usoro si os.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile audio formats na-nyeere aka. Ọtụtụ ndị dị ịrịba ama, AAC (M4A) format na iTunes usages ndabara agaghị rụọ ọrụ na Android; ị ga-kwesịrị tọghata a MP3 format ibido (nanị nri-pịa track na iTunes ma bulie Mepụta MP3 Version).
Na oge ị na n'ezie replicated akụ, laghachi Ntọala> Sound> abata na ekwentị oku: ekwentị ringtone ma chọọ ya. Ọ pụrụ nwere aha nke egwu ma ọ bụ nke faịlụ, ịdabere na dị nnọọ otú ID3 mkpado na-guzobere.
Ọ ga-amalite ebre mgbe ị bulie ya. Congrats, i n'ezie ka a ahaziri ringtone!
Otu nwere ike ugbua nwara ole na ole n'ime ọtụtụ ngwa nke na-ekwusi ike ịzụlite ụdaolu n'ihi na gị iPhone. Otú o sina dị, i nwere n'ezie yikarịrị N'otu aka ahụ chọpụtara ikpe ha na-kama na-ekwesịghị ịdị ebe onye ọ bụla nwere ohere achọrọ nchekwa na iPhone na N'ihi apụghị-agụnye ndị aj u gị aj u ndepụta.
Kama, i kwesịrị mmekọrịta gị iPhone na iTunes iji nweta ndị awụ ọsọ n'ugwu na-egosi elu. Onye dị iche na nke a guideline bụ Garageband, nke nwere ike ịzụlite na ichekwa ụdaolu na ihe iPhone enweghị chọrọ a dị iche iche na kọmputa usoro bụla.
Ụzọ ọzọ na folks ahọrọ iji hazie ha iPhones bụ site na-ahọpụta ọdịyo ma ọ bụ na-akụ na-egwuri maka ekwentị ringtone. Ezie na iPhone abịa ọkọlọtọ na ibu nke top àgwà ụdaolu, i nwere ike Ọzọkwa-eme ka gị nnọọ onwe si nnoo ọ bụla ụdị track tinye n'ọrụ ringtone ngwa ma ọ bụ na-azụta ha si Apple si ringtone ụlọ ahịa. Mgbe unu nwere n'ezie nwetara ringtone na ị chọrọ ahu nagide kwajuru jidesie gị ekwentị,
Nzọụkwụ 1: Site Apple iPhone n'ụlọ ngosi, na pịa Ntọala. Na Ntọala, mgbata Ụda na 3rd ìgwè nke ọzọ. Na na ada ụda, swipe ka ụda na Omume ọma jijiji nakawa etu esi so. N'oge na akụkụ, ịchọọ maka Ringtone. Nke na-egosi kpọmkwem ihe ị n'ezie setịpụrụ dị ka gị ẹdude iPhone ringtone. Enweta ya ịgbanwe na. The menu ekpughe ị na ndepụta niile ụdaolu awa na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2: Iji nweta ika-ọhụrụ ụdaolu, enweta na Store bọtịnụ na n'elu nri onu. Nke a ga-ewe gị ka ringtone nke ebe iTunes ụlọ ahịa na ebe ị pụrụ bukọta on ika-ọhụrụ ụdaolu.
Nzọụkwụ 3: Ọfọn, ọ bụrụ na ị họrọ bụghị ịzụta ika-ọhụrụ ụdaolu, Otú ọ dị, kama ahu nagide ndị kwajuru na ekwentị gị, na mbụ collection edochi na Ringtones akụkụ bụ ndị na ị zụrụ si iTunes Store ma ọ bụ mepụtara tinye n'ọrụ onye ọzọ na ngwa ma n'ezie synced gị Apple iPhone.
Nzọụkwụ 4: Ka ị na enweta na a ringtone, ọ ga-egwu otú i nwere ike zoro ezoro Peek ọ na-ekpebi ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe ị chọrọ. Mgbe i n'ezie họrọ ụdaolu i bu n'obi na-ahu nagide dị ka ndabere gị, hụ na o nwere Checkmark n'akuku ya. Mgbe ahụ enweta na ụda bọtịnụ na n'elu aka ekpe onu ma ọ bụ pịa Home button laghachi n'ụlọ ngosi. Gị nhọrọ bụ ichekwa ozugbo.
Ya mere, site ugbu a, mgbe ọ bụla a ekwentị oku na-abịa, na ringtone ị nanị ẹmende ga-egwu (ọ bụrụ na i n'ezie nyefere kpọmkwem ụdaolu maka listi ọkpọ oku, nke ahụ bụ. Ọ bụrụ na otu nwere, ndị ụdaolu na-ụzọ). Nanị na-uche-ege ntị anya na audio, na ọ bụghị a buzzing ekwentị, ya ka ị ghara atụ uche si na ụdị ọ bụla nke ekwentị oku.
Top 20 nrụọrụ na égwu ka Download Funny Ringtones
Esi Free Ringtones maka iPhone
Xbox One akwado Media Format
Olee otú Mee MOV (QuickTime) Nta
Olee otú iji tụgharịa Video ọsọ ọsọ na mfe
DVD Player Software: Play DVD na Windows
Olee otú dezie iTunes Videos
Olee otú Download ezumike Videos na Ọkụ ka DVD
> Resource> Video> otú ịgbanwe Ringtones on Android ekwentị mkpanaaka na iPhone